Ungawashumeka kanjani amafonti kumafayela e-LibreOffice | Kusuka kuLinux
Enye yezinkinga ezivame kakhulu lapho wabelana ngamafayela wombhalo ocebile (noma ngabe iZwi noma i-OpenOffice / i-LibreOffice) ihlobene nokutholakala kwamafonti asetshenziswe kumshini ngamunye ofuna ukuwabuka noma ukuwahlela lawa mafayela.
Ngakho-ke, ngokwesibonelo, ngelinye ilanga ngabelana ngefayela leLibreOffice nozakwethu futhi lapho elivula, walibona ngokuhlukile. Inkinga, ngokusobala, ukuthi wayengenayo ifonti engangiyisebenzise kulowo mbhalo efakwe emshinini wakhe.
Ungayixazulula kanjani? Impendulo esobala kakhulu kungaba: ukufaka ifonti emshinini womlingani wami. Lesi sixazululo asisihle kakhulu hhayi kuphela ngoba kuyadingeka ukuba namalungelo okuphatha kulowo mshini kepha futhi ngoba ekugcineni ungabelana ngalelo fayela nabanye abantu abaningi futhi bekungeke kube nokwenzeka ukuthi unamathisele ifonti kubo ukuze balande bese bezifakela bona ngokwabo. Ngaphezu kwalokho, kunezinye izixazululo ezisebenza ngokwengeziwe.
Owokuqala ukugcina ifayili njenge-hybrid PDF, ezovumela abamukeli befayela ukuthi bakwazi ukulivula ngeLibreOffice futhi wenze ukuhlela okufunayo.
Ngokuphikisana nalokho abantu abaningi abajwayele ukukucabanga, ama-PDF awasho ukuthi "afundwa kuphela" kepha ahloselwe ukuphatheka, njengoba kukhonjisiwe ngamagama awo esiNgisini (Piyahleleka Dumsebenzi Fi-ormat).
Lokhu kusho ukuthi isichasiso siyaphatheka nokuthi ifayili "libukeka ngokufana kunoma yimuphi umshini" hhayi ekugwemeni ukukwazi ukulihlela. Eqinisweni, iLibreOffice ingavula futhi ihlele amafayela e-PDF, inqobo nje uma inefayela le-OpenDocument elishumekiwe. Ukubona ngokuningiliziwe ukuthi ungayithola kanjani, ngiphakamisa ukuthi ngifunde lokhu esinye isihloko.
Shumeka amafonti kumafayela e-LibreOffice
Isixazululo sesibili kungenzeka sibonga ku ukusebenza okusha ifakwe kuhlobo lweLibreOffice 4.1. Manje kungenzeka ukushumeka amafonti asetshenziswe kumibhalo ye-LibreOffice Writer, Calc, noma i-Impress, kuqinisekiswe ukuthi idokhumenti izobukeka ifana ncamashi kunoma yimuphi umshini oneLibreOffice 4.1 noma ngaphezulu.
Lokhu okunye kunenzuzo yokuthi abasebenzisi basebenzise kakhulu ukuguqula amafayela weLibreOffice kunokuhlela ama-PDF e-hybrid (yize le kusayindlela efanelekile yokuxazulula inkinga).
Kufanele nje uye Ifayela> Izakhiwo> Ifonti bese ukhetha okukhethwa kukho Shumeka amafonti kudokhumenti yakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Ungawashumeka kanjani amafonti kumafayela e-LibreOffice
Sawubona! Ngabe usayizi wefayela noma isisindo singashintsha kangakanani ngokufaka amafonti?
Sawubona. Ngikwenzile ukuhlolwa nge-odt document futhi kusuka ku-28 kB kuya ku-2,2 MB ngisebenzisa uhlobo lwe-Liberation (sans ne-serif).
Kunjalo ... kunengqondo ukuthi inyuka ngosayizi ngokungazelelwe ngoba kufanele ishumeke amafayela wamafonti asetshenzisiwe ...
Siyabonga ngokwenza isivivinyo nokuphawula.
Kuhle, kulula, kuyasiza 😀
Nginamahloni ... 😛
UCristian Moreno kusho
usizo, ngoba ihhovisi lami lamahhala elingu-4.1 emanjaro, lifaka kuphela isigatshana sokuqala futhi ukusuka lapho liye phansi alisabizi onobumba bokuqala. Ngakho-ke:
kuzinketho zokulungiswa kokuzenzakalela, okukodwa kwe- «njalo ukubeka owokuqala ngofeleba esigabeni ngasinye» kukhethiwe
Phendula ku-cristian moreno
Ngiyajabula ... bekungumbono ...
Uyazi ukuthi kwenzekani uma idokhumenti oyigcina ku-LibreOffice yakho, enezinhlamvu ezishumekiwe, ivulwa e-Micro $ oft's Office? ...
Ngenze isivivinyo ngegama 2007 ku-xp kusukela ku-LibO 4.1 ku-debian. Ngaphandle kokuthi ifayili lonakele, liyalifunda yize lingabukeki lilihle kakhulu. Iyabona amafonti ashumekiwe kepha ayihloniphi usayizi. Yize bengilokhu ngicabanga ukuthi kuyinto ethile ngamabomu.
ngiyabonga edeplus! 🙂
Ngizigcinele ukusebenzisa iWindows ukuyibheka.
Kuthiwani uma uyigcina usebenzisa ifomethi engu-1.2 enwetshiwe?
Ngabe kuvela iphutha elifanayo?
Kuzofanele ngivule iWindows damn, nje.
Ngibone isixhumanisi mayelana nefomethi ye-usemoslinux enwetshiwe engu-1,2 no-1.2. Manje sengizobona ukuthi kwenzekani lapho kulondolozwa i-odt ngefomethi enwetshiwe engu-1.2
Iqiniso ukuthi emsebenzini wami, akekho osebenzisa i-linux noma i-LibreOffice. Futhi kuma-PC wesikhungo iWin XP eneHhovisi 2003 ifakiwe.
Ngakho-ke lapho ngigcina imibhalo futhi ngiyithumela kusuka kukhompyutha yami, angikwazi ukusebenzisa ifomethi yendabuko ye-.odt, kodwa ngigcine njenge-.doc
Sawubona. Ngilondoloze idokodo le-.odt ngefonti ekhethekile (i-anarrosa font ttf)
Ngaphambi: Ifayela> Izakhiwo> Ifonti / shumeka amafonti akumbhalo.
Futhi okokuqala, Amathuluzi »Izinketho» Layisha / Gcina - Okuvamile. Uhlobo lwefomethi ye-odf 1.2
🙁 ayisebenzanga ngenkathi izama ukuyivula ku-Win 7 nge-Microsoft Word Started. Iphutha lokuxwayisa futhi ekugcineni liyivule ngefonti ye-Times New Roman, hhayi nge-embedded eyodwa
Kulungile ... futhi, umqondo walokhu bekuwukuhlala uyivula ngeLibreOffice ngefomethi ye-ODT (kokubili kuWindows nakuLinux).
Ukuyigcina ku-DOC bekuyisivivinyo esivela kumazwana, nje.
Kulokhu, okunye okuyi-hybrid PDF, akukho kungabaza.
Umnikelo omuhle kakhulu .. 😀
Ngiyabonga elav! Kuhle ukubuya… 🙂
Easy futhi elula. Ngangingakaze ngiyibone leyo thebhu.
Ngiyabonga kakhulu, ngisiza kakhulu.
Kuhle kakhulu, kuzongisiza. Ngiyabonga!
Kuhle kakhulu! ngiyabonga!
Umnikelo omkhulu !!